“Sababtan ayuu iigu dhowyahay Mohamed Salah kooxda Liverpool” – Dejan Lovren – Gool FM
“Sababtan ayuu iigu dhowyahay Mohamed Salah kooxda Liverpool” – Dejan Lovren
Dajiye November 1, 2018
(Liverpool) 01 Nof 2018. Difaaca reer Croatia iyo kooxda Liverpool Dejan Lovren ayaa la hadlay wargeyska “Liverpool Echo” ee si aad ah ugu dhow kooxda Liverpool, wuxuuna ka hadlay waxyaabo badan ee ku saabsan xirfadiis ciyaareed ee Reds.
Dejan Lovren ayaa sidoo kale ka hadlay saaxiibtinimada kala dhexeysa laacibka reer Masar ee Mohamed Salah, gudaha garoonka iyo banaankiisaba, inkastoo uu Salah yimid garoonka Anfield xili ciyaareedkii lasoo dhaafay.
“Haa, inkasta uu Mohamed Salah yimid xilli ciyaareedkii hore, hadana waxaan wada xiriirnaa maalin kasta tan iyo maalintii uu yimid halkan, waxaan dareemay in Mohamed Salah uu aad iila mid yahay”
“Waxaan dareemayaa in aniga iyo Salah aan wada leenahay taariikh isku mid ah, waxaan soo wada marnay waqtiyo adag, noloshuna way adagtahay”.
“Ma ahan wax sahlan in Mohamed Salah uu kusoo koray dalka Masar wax la’aan, sidoo kale dalka Croatia waxaa ka jiray dagaalo, mana jirin wax aan heysanay”.
“Kadib waxaa imaaneysa dhanka dabeecada ee bini’aadanimo, qaabka uu u hadlo, dabeecadiisa iyo sida uu u maamulayo xaaladaha, waxaan nahay saaxiibo isku dhow”.
“Cristiano Ronaldo Waqtiga Saxda ah ayuu yimid Juventus” - Marcello Lippi
Zinedine Zidane oo fariin u diray jamaahiirta kooxda Juventus